Budata eFootball 2022 maka Windows
Free Budata maka Windows (50 GB)
Budata eFootball 2022,
eFootball 2022 (PES 2022) bụ egwuregwu ịgba bọl nefu na Windows 10 PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS na ngwaọrụ gam akporo. Dochie egwuregwu bọọlụ efu nke Konami PES nke na-akwado egwuregwu egwuregwu ikpo okwu, eFootball dị ugbu a maka ndị na-akwado bọọlụ site na Steam site na nkwado asụsụ Turkey.
eFootball World bụ obi eFootball 2022. Chetaghachi ọgụ ịma aka nezie nke kachasị amasị gị site na isoro ndị otu egwuregwu na-egwu ebe a. Naka nke ọzọ, wulite otu nrọ gị site na ịnyefe na ịzụlite ndị egwuregwu ịchọrọ. Na -asọrịta mpi megide ndị mmegide si nakụkụ ụwa niile na nnukwu asọmpi na ihe omume kacha atọ ụtọ mgbe ị dị njikere.
Weghara ndị otu dị ịtụnanya dịka FC Barcelona, ​​Manchester United, Juventus na FC Bayern München. Soro ndị otu Barcelona, ​​Bayern Munich, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, River Plate gwuo egwuregwu megide ndị mmadụ ma ọ bụ ọgụgụ isi. Kpọọ egwuregwu PvP nịntanetị wee mezuo ebumnuche ebumnuche iji nweta ụgwọ ọrụ.
Rụ otu nrọ gị wee hụ ndị egwuregwu si nakụkụ ụwa niile. Were ndị na -egwu egwuregwu na ndị njikwa dabara na usoro na usoro ị họọrọ wee zụlite ha nike ha. Mee atụmatụ ibugharị gị kacha chọọ na eFootball 2022 wee zụlite ndị egwuregwu dịka i chere dabara adaba.
Ebumnuche ọ bụla nwere ụgwọ ọrụ nke ya, mee ike gị niile site na ịmecha ihe niile i nwere ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ụgwọ ọrụ ka mma, nwaa iji mkpụrụ ego eFootball mezue ndị ọrụ adịchaghị. Ego eFootball bụ ego egwuregwu ị nwere ike iji wee bịanye aka na ndị egwuregwu wee nweta ngafe egwuregwu bara uru, netiti ihe ndị ọzọ. GP bụ ego egwuregwu ị nwere ike iji banye ndị egwuregwu na ndị njikwa. Ihe eFootball bụ isi ihe egwuregwu ị nwere ike gbapụta maka mbinye aka na ihe ọkpụkpọ.
Enwere ụdị egwuregwu anọ na eFootball 2022: Standard, Trending, Featured and Legendary.
Ọkọlọtọ - A na -ahọrọ ndị egwuregwu dabere na arụmọrụ ha noge a. (Enwere mmepe onye ọkpụkpọ)
Na -ewu ewu - A na -ekpebi ndị egwuregwu site notu egwuregwu ma ọ bụ izu nke ha mere nke ọma noge oge niile. (Ọ nweghị mmepe onye ọkpụkpọ)
Egosiputara - Ndị egwuregwu ejiri aka họrọ dabere na arụmọrụ ha na oge ugbu a (mmepe Player dị)
Akụkọ mgbe ochie - Dabere notu oge akọwapụtara nke ndị egwuregwu mere nke ọma. Ọ gụnyekwara ndị egwuregwu lara ezumike nka nwere nnukwu ọrụ. (Enwere mmepe onye ọkpụkpọ)
Enwere ụdị egwuregwu ise dị na eFootball 2022:
Omume Njem - Gwuo megide ndị na -emegide ọgụgụ isi mmadụ nụdị njem, nakọta ihe omume wee nweta ụgwọ ọrụ.
Ihe ịma aka - Kpọọ nịntanetị megide ndị mmegide mmadụ, mezuo ebumnuche ebumnuche ekenyela iji nweta ụgwọ ọrụ.
Egwuregwu ngwa ngwa nịntanetị - Gwuo egwuregwu ịntanetị nkịtị na -emegide onye mmegide mmadụ.
Lobby Match Online-Mepee ụlọ egwuregwu nịntanetị wee kpọọ onye mmegide maka egwuregwu 1-na-1.
EFootball Creative League - Jiri otu okike kee ihe megide ndị kacha mma na eFootball World. Kpọọ egwuregwu PvP megide ndị mmegide dabara adaba ma nakọta ihe iji bulie ọkwa. Nweta ụgwọ ọrụ dabere na arụmọrụ na ọkwa gị noge agba (egwuregwu iri).
Ihe achọrọ maka eFootball 2022
Akụrụngwa chọrọ igwu eFootball 2022 na PC: (eFootball 2022 PC chọrọ sistemụ pere mpe zuru oke iji mee egwuregwu ahụ, yana ka ọ hụ ahụmịhe kachasị ọhụrụ, kọmputa gị ga -emerịrị ihe eFootball 2022 chọrọ sistemụ chọrọ.)
Obere usoro chọrọ
Sistemụ arụmọrụ: Windows 10 64-bit
Nhazi: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350
Nchekwa: 8GB Ram
Kaadị vidiyo: Nvidia GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon HD 7790
Netwọk: njikọ Ịntanetị brọdband
Ohere: 50 GB nke ohere dị
Nchọpụta sistemụ akwadoro
Ihe nhazi: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600
Kaadị vidiyo: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590
eFootball 2022 ngosi
Kedu mgbe a ga -ewepụta ngosi eFootball 2022? A ga -ewepụta ngosi eFootball 2022? A na -atụ anya ngosi eFootball 2022 maka PC, mana Konami ekpebiela ikesa egwuregwu bọọlụ nnọchi PES ọhụrụ nefu. Nadịghị ka FIFA 22, eFootball 2022, ya na aha ya na -agaghị echefu echefu PES 2022, enyere ndị na -akwado bọọlụ nefu. Enwere ike ibudata eFootball 2022 nefu na kọmpụta Windows.
Kedu mgbe eFootball 2022 Mwepụta ekwentị ga -apụta?
eFootball 2022 ga -adị dị ka mmelite eFootball PES 2021 maka mkpanaka, na -eweta ọgbọ egwuregwu bọọlụ nwere nkwalite nakụkụ niile site na injin egwuregwu ruo ahụmịhe egwuregwu. Nkwupụta Konami kwuru, Anyị chọrọ ijide naka na ndị egwu anyị na -enwe eFootball PES 2021 na ekwentị ga -aga nihu na -enwe ọmarịcha ahụmịhe bọọlụ na eFootball 2022. Niburu nke ahụ nuche, anyị ga -enye ekwentị PES 2022 dị ka mmelite kama ịwụnye ọhụrụ.
Ị ga-enwe ike ịmalite ahụmịhe eFootball 2022 gị site na ịzụrụ ụfọdụ ihe egwuregwu gị site na eFootball PES 2021. Site na mmelite egwuregwu ahụ, ihe chọrọ sistemụ kacha nta ga -agbanwe na anaghị akwado ụfọdụ ngwaọrụ. Maka ngwaọrụ akwadoghị, ọ gaghị ekwe omume igwu egwuregwu ahụ mgbe emelitere ya na eFootball 2022. Ịrụ ọrụ ga -adị iche netiti ngwaọrụ akwadoro. Ọ bụrụ nuche ime ka ngwaọrụ gị dị ọhụrụ, gbaa mbọ jikọọ data gị na eFootball PES 2021. Nke a ga -enyere gị aka ịkwaga akụ gị na eFootball 2022.
Ụdị egwuregwu: Enwere ụdị egwuregwu anọ: Ihe omume njegharị, ihe ịma aka, egwuregwu ngwa ngwa nịntanetị na oghere egwuregwu ịntanetị. Ndị na -egwu egwuregwu nke nkwekọrịta ya agwụbeghị nwere ike igwu ụdị egwuregwu a. Ụfọdụ egwuregwu nwere ike belata isonye na ndị egwuregwu na -emezu ọnọdụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na nkwekọrịta onye ọkpụkpọ emebiela, ha nwere ike isonye negwuregwu ngwa ngwa nịntanetị yana nọnụ ụlọ egwuregwu ịntanetị.
Ụdị egwuregwu: E nwere ụdị ndị egwuregwu anọ: Standard, Trending, Featured, and Legendary. Nkwekọrịta onye ọkpụkpọ gị na -adịgasị iche site nụdị. Dịka; Enwere ike iji GP naanị banye ndị ọkpụkpọ ọkọlọtọ. Na eFootball 2022, ị nwere ike nwee ụfọdụ ndị egwuregwu ka ha na ndị otu gị bịanye aka na nkwekọrịta.
A ga -ewepụta eFootball 2022 Mobile maka ngwaọrụ gam akporo na iOS. Ndị na -egwu egwuregwu ga -enwe ike ịme egwuregwu megide ibe ha. A ga-atụkwasị obe netiti ekwentị na consoles na mmelite nọdịnihu. Kedu mgbe eFootball 2022 Mobile ga -ahapụ? Maka ndị na -ajụ ajụjụ a, a ga -ekwupụta ọkwa eFootball 2022 Mobile na Ọktọba.
eFootball 2022 Ụdịdị
Nha faịlụ: 50 GB
Kacha ọhụrụ na: 01-01-2022
Onye njikwa bọọlụ 2022 bụ egwuregwu nchịkwa bọọlụ Turkey nwere ike igwu na kọmpụta Windows/Mac na...
Onye njikwa bọọlụ 2021 bụ oge ọhụụ nke onye njikwa bọọlụ, nke kacha ebudatara na egwuregwu njikwa...
FIFA Online 4 bụ nsụgharị pụrụ iche maka gị igwu egwuregwu bọọlụ kacha mma FIFA usoro na PC na...
Soccer Pro Evolution 2013, PES 2013 dị nkenke, so negwuregwu bọọlụ siri ike, otu nime egwuregwu...
Site na nbudata PES 2021 (eFootball PES 2021) ị nwetara ụdị PES 2020 emelitere. PES 2021 PC na...
PES 2020 (eFootball PES 2020) bụ otu egwuregwu bọọlụ kachasị mma ị nwere ike ibudata ma kpọọ na PC....
Site na nbudata PES 2019 Lite, ị nwere ike igwu Pro Evolution Soccer 2019, otu nime egwuregwu bọọlụ...
Budata PES 2019! Pro Evolution Soccer 2019, nke a maara dị ka PES 2019, pụtara dị ka egwuregwu...
eFootball 2022 (PES 2022) bụ egwuregwu ịgba bọl nefu na Windows 10 PC, Xbox Series X/S, Xbox One,...
In WE ARE FOOTBALL, mar bhainisteoir agus mar chóitseálaí, gheobhaidh tú taithí ar na mothúcháin...
NBA 2K22 bụ egwuregwu basketball kacha mma ị nwere ike igwu na kọmputa Windows gị, consoles...
Mara: PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018) ngosi na ụdị zuru ezu adịkwaghị maka nbudata na Steam....
Ụdị PC nke PES 2015, ụdị ọhụrụ nke Pro Evolution Soccer ma ọ bụ PES ka anyị na-eji ya na-emekarị,...
Site na ụdị Pro Evolution Soccer nke 2009, otu nime usoro egwuregwu bọọlụ kachasị mma noge niile, ị...
PES 2017, ma ọ bụ Pro Evolution Soccer 2017 nwere ogologo aha ya, bụ egwuregwu ikpeazụ nke usoro...
Igwe eserese ohuru na-echere ndị ọrụ nwere Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014), ụdị ewepụtara nafọ...
PES 2016 bụ otu nime egwuregwu bọọlụ kachasị mma ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado...
PES 2017 Trial Edition bụ PES 2017 na-egwu nefu. Konami na-ewepụtakwa ụdị egwuregwu bọọlụ...
FreeStyle Football bụ egwuregwu anyị nwere ike ịkwado ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu bọọlụ...
Snowboard Party bụ egwuregwu ịkwọ ụgbọ mmiri nwere eserese na egwu dị mma nke ị nwere ike igwu na...
3on3 FreeStyle bụ egwuregwu basketball nke nwere ike inye gị ntụrụndụ ị na-achọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ...
Onye njikwa CyberFoot bụ egwuregwu njikwa bọọlụ ọgbọ na-esote. Egwuregwu ahụ dị nnọọ mfe iji ụzọ dị...
Parkour Simulator 3D bụ egwuregwu na-agba ọsọ parkour kacha mma ị nwere ike igwu ma ọ bụrụ na...
Obere Golf bụ egwuregwu gọọlfụ nefu nke Miniclip nwere eserese dị mfe ị nwere ike igwu na ihe...
Njikọ Rocket bụ egwuregwu ị nwere ike ịmasị gị ma ọ bụrụ na ike gwụ gị maka egwuregwu bọọlụ ama ama...
Tenis Pro 3D bụ egwuregwu tenis nefu na nke pere mpe nke enwere ike ịkpọ na mbadamba Windows na...
Skateboard Party 3 bụ egwuregwu skateboarding nwere ụdị egwuregwu dị iche iche ị nwere ike soro ndị...
Tenis World Tour bụ egwuregwu egwuregwu nke gụnyere ọtụtụ ndị egwuregwu tenis ama ama. ...